Madaxii biyo xireenka Abay ee dalka Itoobiya oo isaga oo mayd ah la helay - Somali
Madaxii biyo xireenka Abay ee dalka Itoobiya oo isaga oo mayd ah la helay
Posted at 11:22 26 Luulyo 201811:22 26 Luulyo 2018
Xildhibaannada Suudaanta Koonfureed oo loo qaybiyay lacag ay gawaari ku gataan
Dawladda Suudaanta Koonfureed ayaa difaacday go’aanka ay xildhibaan kaste oo baarlamaanka ka tirsan ku siinayso 40,000 ee doolar, “taas oo ay ku sheegtay in ay tahay dayn ay siinayso si ay gawaari ugu gataan maadaama ay hadda mootooyin adeegsadaan”.
Wararka ka imaanaya Juba waxay sheegayaan in xildhibaannada loo qaybiyay lacagtaas caddaanka ah.
Dhaqaalaha dalkaas waxaa la dagay shantii sano ee ay dagaalladu ka socdeen, warbixin ay Qarammada Midoobay soosaartay bishan horraanteediina waxay ka digtay in tacadiyadii la gaystay inta ay dagaalladu socdeen ay u dhigmaan dambiyo dagaal.
Tobannaan kun oo ruux ayaa lagu dilay dagaalladii dhacay, qaar badan oo ka mid ahna Qaramada Midoobay waxay ku tilmaantay in ay u dhigmaan dambiyo dagaal.
Posted at 8:09 26 Luulyo 20188:09 26 Luulyo 2018
Ninkii madaxda ka ahaa biyo xireenka wayn ee Abay ee dalka Itoobiya ayaa isaga oo mayd ah oo garigiisa ku jira laga helay fagaaraha Masqal Adhababay ee ku yaalla magaalada Addis Ababa.
Ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay dhimashadiisa, booliiska ayaana baaritaanno billaabay.
Waa kuwan qaar ka mid ah sawirrada laga soo qaaday goobta maydkiisa laga helay.
Posted at 7:40 26 Luulyo 20187:40 26 Luulyo 2018
Nin Daacishta Soomaaliya ka tirsan oo xabsi daa'in lagu xukumay
Maxakamada ciidammada dawladda ayaa saaka xukun xabsi daa’in ah ku riday eedeysane Jaamac Xuseen Xasan oo ku eedeysanaa inuu ka tirsan yahay kooxda la baxday khilaafada islaamka.
Garsooraha xukunka riday ayaa sheegay in Jaamac lagu helay inuu ka tirsanaa kooxda daacish isla markaana uu ka soo qaybgalay dagaallo ka dhacay buuraleyda Qandala markii dambana uu u soo wareegay gobolka shabeellaha Hoose halkaas oo lagu qabtay isagoo miino aasaya.
Sidoo kale waxaa la sheegay in eedeysanuhu u qaabilsanaa kooxda Daacish samaynta qaraxyada.
Garsooraha Maxkamada ayaa sheegay in eedeysanaha iyo qareenadiisaba ay u furantahay inay racfaan ka qaataan xukunka dhacay.
Posted at 7:01 26 Luulyo 20187:01 26 Luulyo 2018
Jamhuuriga oo billaabay ol'ole lagu eryayo ku xigeenka Xeer Ilaaliyaha Guud ee Maraykanka
Xisbiga Jamhuuriga ee dalka Maraykanka ayaa billaabay qorshe ay xilka uga qaadayaan masuul ka tirsan waaxda caddaaladda oo dusha kala socda baaritaanka lagu hayo in Ruushku uu farogaliyay doorashadii uu xilka ku qabtay madaxweyne Donald Trump.
Xildhibaannada Aqalka wakiillada ee xisbiga Jamhuuriga ayaa geeyay mawshin xilka looga xayuubinayo xeel ilaaliye ku xigeenka dalka Maraykanka Rod Rosenstein.
Xildhibaan Mark Meadows iyo Jim Jordan ayaa mawshinkaas gudbiyay fiidnimadii Arbacada
Waxay ku eedeeyeen in uu is hortaago baaritaannada, arrintaas oo ay diiday waaxda caddaaladda.
Si xilka looga xayuubiyo waxaa loo baahan yahay in aqlabiyadda Aqalka Wakiillada iyo saddex meeloodoow labo ka mid ah Aqalka Senetka.
Haddaba si aad wax badan uga ogaato Rod Rosenstein lifaaqan sii raac
Rod RosensteinImage caption: Rod Rosenstein
Posted at 6:47 26 Luulyo 20186:47 26 Luulyo 2018
Agaasimaha Waaxda dib u dejinta Barakacayaasha oo xabsi la dhigay
Wararka laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xabsiga la dhigay Daahir Maxamad Nuur oo ahaa agaasimha waaxda dib u dajinta barakacayaasha ee Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta musiibooyinka kadib markii lagu soo eedeeyay lunsashada lacag dhan $84,000.
War ay qortay warbaahinta ku hadasha afka dawladda ayaa lagu sheegay in Daahir Maxamad Nuur uu ku eedeysanyahay xatooyo xoolo dadweyne isla markaana uu ku xiranyahay xarunta dambi baarista ee magaalada Muqdisho.
Daahir wuxuu noqonayaa masuulkii ugu horeeyay ee ka tirsan dawladda madaxweyne Farmaajo oo loo xiro arrin la xiriirta musuqmaasuq.
Posted at 6:31 26 Luulyo 20186:31 26 Luulyo 2018
Wasiirkii waxbarashada Soomaaliya oo xilka laga qaaday
Wasiirkii waxbarashada ee Dawladda Faderaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa xilkii laga qaaday, sida lagu sheegay dikreeto ka soo baxday xafiisk ra'iisulwasaare Xasan Cali Khayre.
Ilaa iyo hadda faahfaahin lagama bixinin sababta loo eryay wasiirka, balse waxaa baraha bulshada haystay in uu yiri ma aqoonsanin jaamacadaha dalka, arrintaas siyaabo kala duwan loo fasirtay.
Waxaa xilkaas sii hayn doona wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada faderaalka Soomaaliya.
Hoos ka daawo wasiirka warfaafinta oo la hadlaya telefishinka Qaranka ka hor inta aan xilka laga qaadin.
Posted at 6:18 26 Luulyo 20186:18 26 Luulyo 2018
Waa maalin Khamiis ah ooy taariikhdu tahay 26 Luulyo 2018.